Ngosiputa egosiputa | NAB Show News | 2020 NAB Show Onye Mmekọ Media na Onye Mmepụta NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
Ihe ngosipụta nke ngosipụta dị mkpa maka ọrụ ndị mgbasa ozi ọ bụla na-eme mgbe ịkwalite ụdị ha. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ọdịyo ahụ adakọghị n'ịchọpụta usoro nke ịhụ ụzọ, mgbe ahụ ihe okike nwere ike tinye nsusu ọnụ nke ndị na-ege ha ntị. Presentedzọ a na-esi ewepụta ya ngosipụta n'okwu ihe nlele. Ma ụda ...
Ihe ntinye vidiyo enyela ihe okike ohuru na ntughari ohuru, na ikesa nkesa na-eme ka omume nke iwulite ndị na-ege ntị ọbụna karịa maka ndị mmepe okike. Ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-achọkarị ụzọ ọhụụ iji mepụta ọdịnaya ka mma ma mee ka ndị na-ege ha ntị nwee ike ịnweta ya ka ọ na-eto. Ọ bụrụ na enwere…
Ọ bụrụ na ịnọ n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi, ị ga - ama ihe ịma aka dị n'ịchọpụta mmepụta karịrị akarị usoro nke ihe ndị dị na nhapụta ọdịnaya. Ivitymepụta n’ime ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-agụnye ihe karịrị ezigbo ọdịnaya nke ọdịnaya dị mma mgbe njedebe ya sitere na ngosipụta kachasị mkpa. Ọkachamara mgbasa ozi ọ bụla nwere akara ...
Onyinyo di nfe nwere ike ikwu otutu ihe, ma iweghara ihe omuma a bu mkparita uka nke nkwuputa ihe omuma nke iguputa ma n’iru ndi na - ege ihe. Ọkachamara ọ bụla na-arụ ọrụ n'ime ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-aghọta na onyonyo n’azụ ọdịnaya vidiyo ha nwere ike ịgwa ndị na-ege ntị na-achọ ozi ọtụtụ ozi. Na sistemụ igwefoto B zuru oke nke B & H, usoro mgbasa ozi…
Streaming Global emebere ụzọ iji nyefee usoro mmiri ọkụ na-egbu oge n'ogo iko ụwa site na iji akụrụngwa ọkọlọtọ, ebe ọ na-agbadata ụgwọ maka usoro maka ndị isi na ndị na-enye ọrụ. The Streaming Global patented na teknụzụ na-echere ịgbachi igwe na-atụgharị sava nchekwa nchekwa igwe ojii ọ bụla ka ọ bụrụ ihe nkesa na-egwu ndụ ngwa ngwa, na-enweghị ịwụnye ngwanrọ ọ bụla ọzọ na sava ahụ. Nke a na - enyere ndụ aka, akara, OTT,…
Ọdịnaya dị ukwuu bụ ụgwọ ọrụ kachasị mma onye ọkachamara mgbasa ozi nwere ike inye ndị na-ege ha ntị. Mana nrụpụta ọ bụla chọrọ teknụzụ ziri ezi maka iji nwee ngosi. Ọ bụrụ na onye okike nwere ike ịchọta njikọ ziri ezi iji mee ka ọdịnaya ha pụta, ọ ga-eme ka nzuta ha ha bakwuo uru. Ọ bụ ya mere ụlọ ọrụ ahụ ji nwee ndị isi Njikọ ọnụ dịka…
Page 1 nke 17012345 » 102030...ikpeazụ »